Zvinhu zvekuita mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapera vhezheni itsva yeLinux Mint yakabuda uye zvirokwazvo vazhinji venyu muchatova nayo pamakomputa enyu. Asi kana iwe uri kufunga nezvekuita yakachena kuisirwa (chimwe chinhu icho vazhinji vashandisi chinoita nguva nenguva) isu tinokuudza iwe matanho api uye zviitoi zvekuita mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara.
Zviito zvatingaite kana kuti hazvina kukosha mukushanda kweLinux Mint 19 Tara, asi izvo zvakakosha kuvandudza mashandiro eLinux Mint 19 Tara.
1 Kugadziridza kugovera mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara
2 Gadzira ekudzosera mapoinzi kana mashoma
3 Kuiswa kweCodec
4 Inogonesa snap mapakeji
5 Kuisa mapurogiramu aunofarira
6 Bhuruu Chiedza kunyorera muLinux Mint 19 Tara
Kugadziridza kugovera mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara
Kunyangwe iri yazvino vhezheni, iyo Linux Mint timu yakwanisa kuburitsa pasuru kana yekuchengetedza yekuvandudza, saka zvinokurudzirwa kumhanyisa system yekuvandudza. Kuti tiite izvi tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana paine chero chaidzo, Linux Mint 19 Tara ichagadziriswa.
Gadzira ekudzosera mapoinzi kana mashoma
Iyo nyowani vhezheni yeLinux Mint 19 Tara inounza nechishandiso Timeshift, chishandiso chekuchengetedza icho chichatibatsira kuve neyedu yese data isingatarisirwe inishuwarenzi. Kuti tiite izvi, kana tangove nepfungwa yapfuura, zvinokurudzirwa kugadzira mufananidzo wekuenda kana paine matambudziko. Sezvo kuisirwa kuri kuchena, kana tichishandisa iyi backup, tichava nemukana wekuve neLinux Mint 19 seyatsva zvakare.
Iyo multimedia yepasirese yakakosha uye inenge yakakosha kune vazhinji vashandisi Nei zvichidaro inokurudzirwa kuisa macodec mapakeji ekuona nekuterera kune multimedia mafaera. Kuti tiite izvi tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Inogonesa snap mapakeji
Kunyangwe Linux Mint 19 Tara yakavakirwa paUbuntu 18.04, iyi vhezheni itsva haina snap package rutsigiro inogoneswa. Kuti ive ichishanda isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kuisa mapurogiramu aunofarira
Zvino zvatave nazvo zvese izvi, isu tinofanirwa kuisa izvo zvirongwa zvatinoda kana kuda. Pakati pavo panogona kunge paGoogle Chrome, Skype kana VLC, kunyangwe paine mamwe akawanda uye akasiyana kwazvo. Sarudzo ndeyedu.
Bhuruu Chiedza kunyorera muLinux Mint 19 Tara
Kana tikashandisa Cinnamon, saka isu tine Redshift application yatinayo, chishandiso chinotibvumidza isu chinja kupenya kwehwindo uye usume iyo inozivikanwa bhuruu mwenje firita. Kuti tishandise, tinoenda kune iyo applet yepaneru iyo yakaumbwa kunge girobhu mwenje. Isu tinodzvanya paapplet uye tobva tamaka sarudzo «Yakagadziriswa» uye nesarudzo «Kutanga nekutanga».
Izvi Aya matanho akakosha atinofanira kutora mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara, asi sezvatakataura, hazvina kukosha uye handizvo chete zviripo, zvirokwazvo kana tisingashande nemapakeji kana isu tinongoda kuva neserura, hausi kuona zvimwe zviito zvakakosha. Chero zvazvingaitika, matanho aya anonyatso kubatsira anopfuura mumwe chete weLinux Mint mushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zvinhu zvekuita mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara
Unogona here kunyora zvimwe zvinhu kuti system iwedzere? semuenzaniso, ndakariisa mumalaptop uye hazviratidze kana iro bhatiri danho ratove rakadzikira zvekuti mushandisi anogona kubatanidza charger.
Iko hakuna chaicho chekuita mushure mekuisa kunze kwekutevera izvo iyo yekugamuchira skrini inokuudza, pasina kubata iyo terminal. Uye kugadzirisa, ipapo pandinobvunza. Uye saka nezvose. Izvo hazvigone kuve nyore. Zvisinei, kuisa zvirongwa zvaunoshandisa ndinofunga izvo hazviverengi, zvakanaka, uye snap package, pasina kutaura.
Uye bvisa flash kana yaiswa: sudo apt-tora purge adobe-flashplugin
Mhoroi, ini handinzwisise sarudzo "yekuvandudza &&" yeakakodzera, inguva yekutanga kuti ndione. Ndeipi basa rayo?. Ndatenda.
Zvakanaka, paive nemaviri & zviratidzo, kana uchigadzirisa chirevo. Mubvunzo unoenda kune "kugadzirisa &".
Pamusoroi. Ini ndiri chimwe chinhu chitsva kuLinux. / Chii chinetso nesnap package?
Yakareba kutaurira, asi chaizvo Mint inobata iyo flatpak kubva kune yayo yekushandisa Center nekumisikidza, uye neizvozvo ichave ingangove yakakwana kuti iwe iwe ugoisa chaiwo maridzi epamhepo zvirongwa seSpotify, WhatsApp, nezvimwe. Nei uchiomesa nekuwedzera iwo mabara?
Shamwari unogona kutsanangura maitiro ekuisa "waini pak" muLINUX MINT 19, nhanho nhanho, ndiko kukwanisa kumhanyisa mamwe mapurogiramu senge zara radio uye adobe audition ndakachiwana muUBUNTU asi ini ndinochida zvirinani linux mint uye ikozvino vhezheni 3 ini ndoda zvirinani. Ini ndinoda iyo (waini pak) nekuti inonditendera kuti ndiise iwo mapurogiramu andinonyanya kushandisa, iyo (waini) vhezheni zvakadaro, hazvindibvumidze kuisa adobe aduition19. Ndosaka ndichiomerera pawaini pak. Ndakaverenga chidzidzo ndakachiita muubuntu uye chakashanda, asi mune mint handigone kuiisa. Ndatenda nerutsigiro.
kutarisira kutarisira kuiisa pane lenovo g475. Ko madingindira evhidhiyo, vga uye wifi madhiraivha aizoiswa otomatiki? lenovo haitsigire
Ini handikwanise kutora odhiyo inoshanda, yakashata kuburitsa, hda-intel
Wakaedza Sudo alsamixer ndokurova iyo F6 kiyi kusarudza kadhi rezwi?
Rangarira kuti kuchengetedza shanduko iwe unofanirwa kumanikidza ESC
Jose Javier akadaro
W7 Yekupedzisira + Ubuntu 10,04 Dual boot
ST250DM000 Nzvimbo 0
Syst. NTFS faira
Inowanikwa 139 GB
Bootable Chikamu. Yakachengetedzwa system
Chikamu - -
40 GB: Partics Logic Mudziyo
1,7 GB chinjana nzvimbo.
Linux chinja -chinjanisa- (0x0,82)
Kuiswa pa /
Maitiro ekuisa L. Mint pane ino michina? Zvingave zvakafanira here kuchinja nzvimbo yakagadzirirwa Ubuntu kuti uipe yakawanda?
Pindura kuna josejavier